Asehoy Power Supply
450W Single Output Power Supply IRS ara-450w
125W QUAD Output Power Supply ITQ ara-125W
Dual 75W Output Power Supply IRD ara-75W
50W Telo Output Power Supply ITT ara-50W
Misy toetra hafa maro izay fiantraikany hery-ny famatsiana fandidiana. Anisan'izany ireo olona miasa mba hiarovana ny famatsiana, izay voatanisa etsy ambany.
Overcurrent : Ny vokatry ny tsy fahombiazana fomba Output entana amin'izao fotoana izao fa lehibe noho tanteraka izany. Izany dia voafetra ihany ny fahaizany indrindra amin'izao fotoana izao ny famatsiana ny hery sy fehezin'ny faritra fiarovana anatiny. Mety hanimba ny hery famatsiana indraindray. Short faritra eo amin'ny hery-famatsian Output sy ny tany dia afaka mamorona onja ao anatin'ny rafitra izay voafetra ihany ny fahaizany indrindra amin'izao fotoana izao sy ny anatiny ny hery impedance ny famatsiana. Raha tsy misy mametra, avo io ankehitriny, ary mety hahatonga overheating manimba ny hery ary koa famatsiana ny entana sy ny interconnects (faritra pirinty biraom-soritra, tariby). Noho izany, ny ankamaroan'ny fahefana amin'izao fotoana izao dia tokony hanana fitaovana mametra (overcurrent fiarovana) fa dia mampiasa ny Output ankehitriny raha mihoatra ny voalaza ambony indrindra.
Overtemperature: Ny hafanana izay ambony noho ny hery sarobidy famatsiana ny mazava dia tsy maintsy misoroka na dia mety hiteraka hery-ny famatsiana tsy fahombiazana. Hafanana be loatra fandidiana mety hanimba ny hery famatsiana sy ny faritra mifandray amin'ny azy. Noho izany, maro no mampiasa ny mari-pana vatsy sensor sy mifandray amin'izany faritra mba mankarary ny famatsiana ny fandidiana raha hafanan'ny zava-dehibe mihoatra manokana. Indrindra indrindra, Semiconductors ampiasaina ao amin'ny famatsiana dia mora hafanana mihoatra ny fetra voalaza. Maro ny sakafo dia ahitana overtemperature fiarovana izay mivily eny ny fanomezana ny mari-pana, raha mihoatra ny fetra voafaritra.
Overvoltage: io fomba tsy fahombiazana mitranga raha toa ny Output malefaka mandeha ambonin'ny DC voatondro sarobidy, izay afaka mitaky be loatra DC malefaka izay manimba ny enta-mavesatra faritra. Matetika, rafitra elektronika entana mahatanty hatramin'ny 20% overvoltage tsy mizaka misy fahavoazana maharitra. Raha izany no misy mandinika, fidio ny famatsiana izay mety mampihena izany. Maro ny sakafo dia ahitana overvoltage fiarovana izay mampody ny famatsiana eny raha malefaka ny Output mihoatra ny vola voafaritra. Fomba iray hafa dia fitaovana izy zener diode Izay mitondra amin'izao fotoana izao ampy amin'ny tokonam-baravarana ny overvoltage ka Izy io dia mampiasa ny fahefana mametra-famatsian ankehitriny ary manakimpy teo.
Soft Start: Inrush amin'izao fotoana izao dia mety ho ilaina fetra rehefa mampihatra fahefana no voalohany, na rehefa zana-kazo vaovao ireo mafana plugged. Matetika, izany dia tratra ny iray malefaka-nanomboka faritra izay slows ny fiakaran'ny voalohany ny amin'izao fotoana izao ary avy eo dia mamela ny ara-dalàna fandidiana. Raha tsaboina, ny inrush ankehitriny dia afaka hiteraka avo Nahatratra mamaly ny amin'izao fotoana izao fa ny output fiantraikany malefaka. Raha izany no manan-danja mandinika, mifidy ny famatsiana amin'ny endri-javatra io.
Undervoltage Lockout: Fantatra ho toy UVLO, raha ny fandehany ny famatsiana ny rehefa mahatratra avo fahan'ny ampy malefaka sy mitodika eny ny fanomezana raha malefaka fahan'ny latsaka ambany ny zava-dehibe sasany. Endri-javatra ity dia ampiasaina ho an'ny vatsy avy amin'ny jiro hery miasa ary koa ny hery bateria. Rehefa niasa avy amin'ny hery ara-bateria UVLO atsahatry ny hery famatsiana (ary koa ny rafitra) raha toa ny bateria malotony be fa nilatsaka ny torohevitra tahirin malefaka iva loatra ny hamela azo antoka fandidiana.
Herinaratra fifampifanarahana mifamadika (EMC): ilaina? Endrika teknika izay manamaivana herinaratra fitsabahan'ny (Emi). In-jiro hery fomba kojakoja, ny DC malefaka dia niova fo ho amin'ny voatetika na pulsed waveform. Izany no mahatonga ny hery famatsiana mba hiteraka tery-tarika feo (Emi) eo amin'ny fototry ny ara mifandray matetika sy ny harmonics. Mba ahitana ny tabataba, mpanamboatra dia tsy maintsy manamaivana erỳ ry zareo na nitarika entona.
Power-famatsiana mpanamboatra manamaivana Emi taratra amin'ny alalan'ny hihodidina ny fanomezana ao anaty boaty vy na Mitifitra coating ny raharaha amin'ny fitaovana metaly. Manufacturers koa dia mila mitandrina ny fisehon'ny ny anatiny ny famatsiana sy ny wiring izay mandeha ao ary avy tao amin'ny famatsiana, izay mety hiteraka tabataba.
Ny ankamaroan'ireo nitarika fitsabahan'ny amin'ny tsipika ny hery dia vokatry ny fototra ara transistor na output rectifiers. Amin'ny hery sy ny fanitsiana-lafin-javatra araka ny tokony mpanova famolavolana, fifandraisana ny hafanana hilentehan'i sy sivana famolavolana, ny hery-famatsian mpanamboatra dia afaka mampihena nitarika fitsabahan'ny mba afaka hahatratra ny famatsiana Emi fitsipika fahafahana misafidy fankatoavana tsy mizaka tafahoatra vidin'ny sivana. Hijery foana ny mahita fa ny hery-famatsian mahafeno ny fepetra takiana mpanamboatra ny fitsipika Emi fitsipika.
Post fotoana: Apr-23-2018
Unit 406, Jinhui Building, Chenjiang Afovoany Street, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou City, Province Guangdong, Sina.